20 लागि परिणाम gumball games
gumball खेलको अचम्मको संसार - थुनामा मा तनाव
चालु, हाम फाल्न, र थुनामा मा तनाव मा स्कूल देखि भाग्न पहेली हल। तिनीहरूले प्रतिबद्ध थिएन एक Prank आरोप भएपछि Gumball र डार्विन थुनामा मा बन्द भएको थियो। अब यसलाई बस्ट गर्न समय! तर यो सजिलो हुनेछैन। प्रत्येक एल
gumball हिउँ साहसिक
डार्विन र Gumball बरफ हराएको छन् सबै मूर्तिहरू संकलन गर्न आवश्यक छ। प्लेटफर्म र अवरोध डार्विन र Gumball को मूर्तिहरू फसाउन छोड्नुहोस् र सूचित स्थानमा ल्याउन
gumball को अचम्मको दुनिया: युद्धमा गेंदबाज
को Gumball अचम्मलाग्दो विश्व: लडाई गेंदबाज आफ्नो लडाई गेंदबाज सुझाव र चाल साझेदारी गर्नुहोस्! यो खेल खेल्न गर्दा आफ्नो साथीसँग रमाइलो।
elmore मा gumball डरलाग्दो सपना
मा Elmore विश्व दुःस्वप्न Elmore मा दुःस्वप्न मा Gumball विरुद्ध गरिएका छ। रिचर्ड गरेको घृणित पकाउने Gumball, डार्विन, र anais केही फोहर सपनाहरू दिनुभयो। तपाईं, सोडा राक्षस को संसार मा बाँच्न सक्नुहुन्छ हट डग chunks चिल्ला र विशाल bact
Gumball एक कराटे मास्टर छ! उहाँले शहर सडकमा साथ चलिरहेको र दुष्ट Ninjas विरुद्ध लडिरहेका छ। आफ्ना सबै शत्रुहरू पराजित र आफ्नो बाटो मा सबै ऊर्जा पेय डिब्बे सङ्कलन गर्न उहाँलाई मद्दत गर्नुहोस्। होसियार हुनुहोस् र सबै अवरोध हटाउन प्रयास गर्नुहोस्।
gumball तर्साउने घर Prank
एक तर्साउने घर Prank कुनै अन्य जस्तै लागि तयार! Gumball मित्र भूत रूपमा लुगा र उहाँलाई तर्साउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई मा टेबल गर्नुहोस्! एक वास्तविक भूत परिणत र नक्कली phantoms तल Chase गर्न एक्टोप्लाज्म पिउन। तपाईं तर्साउने Manor उम्कन सक्छन्
gumball पानी छोराहरू
गर्मी पिट्न पानी बेलुन सुरु।
gumball कडा टोपी प्रयास
सहायता डार्विन, सबै जेली सिमी सङ्कलन र प्रत्येक स्तर मा आफ्नो मित्र पुग्न हास्यास्पद कार्टून श्रृंखला Gumball को अचम्मलाग्दो विश्व को मुख्य protagonist। मित्र र वातावरण तपाईं आफ्नो साहसिक मा मदत गर्नेछ। रमाइलो गर!
gumball केन्द्र पार्क
जहाँ धेरै अवरोधहरू छन् पार्क, मा Gumball स्केटबोर्डिङ्ग। Gumball गरेको मिशन सबै अवरोध हटाउन र रेखा सुरक्षित गर्न हो। भनेर बाटोमा देख्ने वस्तुहरू सङ्कलन।
gumball अन्धो झुक्काएका खेल
Gumball अन्धो झुक्काएका ठूलो भौतिक विज्ञान-आधारित पहेली खेल हो। आफ्नो काम बक्से राख्दै प्रत्येक अन्य पूरा र तपाईं rainbows सङ्कलन रूपमा पैड बाउन्स गर्न दुई वर्ण छ।
gumball स्कूल घर भीड
Gumball स्कूल सदन RUSH। प्ले अब स्कूल हाउस रश! Elmore जुनियर उच्च एक दरार फस्टाइरहेका छ! डार्विन र Gumball सम्पूर्ण विद्यालय बाढी अघि लिक रोक्न रूप समूह। चढ्नुहोस्, पौडी खेल्न र तीन विशाल स्तर मा अन्वेषण।
पागल चालक2कुंग फू पांडा
कुंग फू पाण्डा शैली मार्शल आर्ट पो गर्ने sushis सङ्कलन गर्न action.Drive!
केही फोहर परदेशी Nuke गर्न आह्वान - तपाईं एउटा सरल देश सुँगुर हुनुहुन्छ! तपाईं outerspace मा लाश र reptoid परदेशी बेहोश रूपमा सिक्का सङ्कलन। हेर्नुहोस् तपाईंको जीवन - पनि साफ सुँगुरहरु अजेय छैनन्!
माथि बन्दुक छान्नुहोस् र shotguns संग विस्फोट टाढा प्रेत प्राणीहरू र व्यवसायी। बच्न र बन्दुक किन्न।
सवार हत्यारा 2
आफ्नो नाडी पेस्तोल संग troopers गोली। लामो शट को लागि मा जूम, र ती रिलोड हेर्नुहोस्।
हेलिकप्टर हडताल शक्ति
यो सम्पूर्ण सेना बनाम एक अपाचे gunship छ! Luckily यो बर्ड केही मर्मतका भइरहेको र यो गति र फायर क्षमता छ सुधार केही बरु सुन्दर अपग्रेड पायो ... छ। त्यसैले हावा पायलट चाल्न र शत्रु हेलिकप्टरों, ट्यांक, सुविधा र को नामेट
को जाल जोगिन र बुद्धिमानीसाथ उपकरण प्रयोग, स्वादिष्ट व्यवहार पाउनेछन्!
13 दिन पछि
यस प्रेत infested शहर मार्फत थप हतियार र आफ्नो explosives.Shoot तरिका संग नरक मा 13 दिन गर्न sequel र स्वतन्त्रता द्वीप पुग्न प्रयास गर्नुहोस्।